Myasthenia Gravis (ကြွက်သားပျော့ခွေ အာရုံကြောရောဂါ) - Hello Sayarwon
Myasthenia Gravis (ကြွက်သားပျော့ခွေ အာရုံကြောရောဂါ)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Myasthenia Gravis (ကြွက်သားပျော့ခွေ အာရုံကြောရောဂါ)
Myasthenia Gravis (ကြွက်သားပျော့ခွေ အာရုံကြောရောဂါ) ကဘာလဲ။
Myaesthenia gravis ဆိုတာ ခုခံအားစနစ်က မိမိကိုယ်ကို ပြန်လည် တိုက်ခိုက်တဲ့ အာရုံကြောကြွက်သား ရောဂါတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ မျက်လုံး၊ မျက်နှာ၊ လည်ချောင်း၊ လက်နဲ့ ခြေထောက်တွေရဲ့ ကြွက်သားတွေကို အားယုတ်လျော့သွားစေတယ်။ ရောဂါစဖြစ်တဲ့ ပထမ ၃ နှစ်အတွင်းမှာ ကြွက်သားအားလျော့မှု အများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ ဆိုးဝါးမှုဟာ တဖြည်းဖြည်း နှေးကွေးလာပါတယ်။
Myasthenia Gravis (ကြွက်သားပျော့ခွေ အာရုံကြောရောဂါ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
လူတိုင်း ဒီရောဂါဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ငြားလည်း အမျိုးသမီးတွေမှာ အသက် ၄၀ မတိုင်ခင် အဖြစ်များပြီး အမျိုးသားတွေမှာ အသက် ၅၀ နောက်ပိုင်းမှာ အဖြစ်များတယ်။ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေများကို လျော့ချခြင်းဖြင့်စီမံနိုင်တယ်။ အချက်လက်များကို ထပ်မံသိရှိ ဖို့ အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေး တိုင်ပင်သင့်တယ်။
Myasthenia Gravis (ကြွက်သားပျော့ခွေ အာရုံကြောရောဂါ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
Myaesthenia gravis ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။
ရောဂါလက္ခဏာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာ –
ရင်ဘတ် ကြွက်သားများ အားလျော့မှု ကြောင့် အသက်ရှုရ ခက်ခဲခြင်း။
အစာဝါးခြင်း မျိုချခြင်း အခက်အခဲများကြောင့် ခဏခဏ သီးခြင်း၊ ပျို့ခြင်း (သို့) သွားရည် ကျခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လှေကားတက်ခြင်း၊ ပစ္စည်းမခြင်း နှင့် အထိုင်အထ ပြုလုပ်ရ ခက်ခြင်း။
မျက်နှာ ရွဲ့ခြင်း (သို့) မျက်နှာ ကြွက်သားများ အားလျော့ခြင်း။
အသံပြောင်း ရှတတ ဖြစ်သွားခြင်း။
အသက်ရှုကြပ်လာလျှင် (သို့) လက္ခဏာများ ပိုပြီး ဆိုးလာလျှင် ဆရာဝန်နှင့် ပြသ သင့်ပါသည်။ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ လူတိုင်းရဲ့ခန္ဓါကိုယ်တုံ့ပြန်မှုဟာ မတူညီနိုင်ပါဘူး။ သင့်အခြေအနေအတွက် ဘာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကို သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်တာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Myasthenia Gravis (ကြွက်သားပျော့ခွေ အာရုံကြောရောဂါ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်း တိတိကျကျမရှိသော်လည်း ခုခံအားစနစ်ပြန်တိုက်တဲ့ ရောဂါ လည်ပင်းနားရှိ သိုင်းမတ် အကျိတ်နဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိတယ်လို့ သုတေသနပြုသူတွေက ယူဆကြပါတယ်။ မျိုးရိုးဗီဇ ကြောင့်လည်း Myasethenia gravis ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Myasthenia Gravis (ကြွက်သားပျော့ခွေ အာရုံကြောရောဂါ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Myasthenia gravis ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
နှလုံးနှင့် သွေးတိုးရောဂါ ဆေးများ သောက်သုံးနေရခြင်း။
အဖေ သို့ အမေ တွင် Myaesthenia gravis ရှိနေခြင်း။
အထက်ပါဖြစ်ပွားနိုင်ချေများ မရှိခြင်းကြောင့် သင့်မှာ Myaesthenia gravis မဖြစ်ဘူးလို့ ပြောလို့မရနိုင်ပါဘူး။ ဒီအချက်လက်များဟာ မှီငြမ်းကြည့်ရှုဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင် ဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Myasthenia Gravis (ကြွက်သားပျော့ခွေ အာရုံကြောရောဂါ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်တွေက လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများ အဆုတ်၊ အာရုံကြောနဲ့ ကြွက်သားအားနည်းမှုတွေကို စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် အဖြေရှာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် electromyography၊ ကြွက်သားခွန်အားစမ်းသပ်ခြင်း၊ သွေးစစ်ခြင်း၊ ကွန်ပျူတာဓါတ်မှန် ရိုက်ခြင်းများလည်း ထပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Myasthenia Gravis (ကြွက်သားပျော့ခွေ အာရုံကြောရောဂါ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကုသခြင်းကြောင့် သင့်ရောဂါလက္ခဏာများကို မခံစားရအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆေးညွန်းတွေမှာ Neostigmine pyridostigmine, prednisolone, azathioprine, cyclosporine or mycophenolate mofetil တို့ပါဝင်ပါတယ်။ Myaesthenia gravis ကြောင့် အသက်ရှုရခက်ခဲလာလျှင် ဆေးရုံမှာ အသက်ရှုစက်အကူအညီနဲ့ နေသင့်ပါတယ်။ တခြားကုထုံးတွေအနေနဲ့ သွေးရည်ကြည်လဲလည်ခြင်းနှင့် ရောဂါကို ခုခံတိုက်ဖျက်ပေးသည့် ဓါတ် (immunoglobulin) ဆေးသွင်းခြင်းတို့ လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။ သွေးရည်ကြည် လဲခြင်းဆိုသည်မှာ လူ့သွေးထဲက Myesthenia ပဋ္ဋိပစ္စည်း ပါတဲ့ အရည်ကို myasthenia ပဋ္ဋိပစ္စည်း ကင်းစင်တဲ့ သွေးရည်ကြည်နဲ့ လဲလှယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရောဂါကို ခုခံတိုက်ဖျက်ပေးသည့်ဓါတ် (Immunoglobulin) ဆေးသွင်းခြင်းဆိုသည်မှာသွေးကြောထဲကို အသုံးဝင်တဲ့ ခုခံတိုက်ခိုက်ပေးတဲ့ဓါတ်ပစ္စည်း(antibodies) တွေကို တိုက်ရိုက်သွင်းပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်လို့ Myasthenia gravis ကိုဖြစ်စေတဲ့ သိုင်းမတ်အကျိတ် ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်က thymectomy လို့ခေါ်တဲ သိုင်းမတ်ဂလင်း ကို ခွဲစိတ်ခြင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်လို့ သင့်မှာ အမြင်အာရုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြသနာတစ်ခုခုရှိနေလျှင် ဆရာဝန်က သင့်ကို မျက်မှန်တပ်ဖို့ အကြံပြုပါလိမ့်မယ်။ မျက်လုံးကြွက်သားတွေကို လဲ ခွဲစိတ်ကုသနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ခြင်းဖြင့်လဲ သင့်ရဲ့ ကြွက်သားတွေကို သန်မာစေပါတယ်။ ဒါဟာ သင့်ရဲ့အသက်ရှူခြင်းဆိုင်ရာကြွက်သားတွေမှာ ပိုပြီး အထောက်အကူပြုပါတယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက Myaesthenia gravis ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် Myaesthenia gravis ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ရက်ချိန်းမှန်မှန်ပြခြင်းဖြင့် သင့်ရောဂါအခြေအနေ နဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတိုးတက်ပြောင်းလဲမှု ရှိမရှိ သိနိုင်ပါတယ်။
ကြွက်သား အားနည်းခြင်းကိုကာကွယ်ရန် အနားယူခြင်းနှင့် လှုပ်ရှားမှုတွေကို ညီမျှမှုရှိနေအောင် ကြိုးစားပါ။
ကြွက်သား သန်မာမှုရှိစေရန် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ပေးပါ။
အမြင်မှုန်ဝါးနေလျှင် သို့ အမြင်နှစ်ထပ်ဖြစ်နေလျှင်မျက်စိဆရာဝန်နှင့် ပြသင့်ပါတယ်။ စက်ယန္တားအကြီးစား သို့ ယာဉ်မောင်းနှင်ခြင်းများ မပြုရပါ။
သင့်မှာ အစာမျိုချမှု အခက်အခဲ ရှိနေလျှင် အစာသိပ်သည်းမှုပုံစံအမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲကြည့်ပြီးသင့်တော်တဲ့ အစာကို ရွေးစားပါ။
ဆေးလိပ်မသောက်ပါနဲ့။ ဖုန်မှုန့်များကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
Ferri, Fred. Ferri’s Netter Patient Advisor. Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier,2012. Download version.
Myasthenia gravis. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/myasthenia-gravis/basics/definition/con-20027124. Accessed Jul 14 2016
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000712.htm. Accessed Jul 14 2016Ferri, Fred. Ferri’s Netter Patient Advisor. Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier,2012. Download version.
အဖျားကပျောက်သွားပြီ၊ ချောင်းက ဘာလို့ဆိုးနေသေးတာလဲ
တစ်နေ့တာကို လမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့် စတင်ပါ
နေမကောင်းဖြစ်နေချိန် သောက်သင့်တဲ့ အားဖြည့်ဖျော်ရည်တွေ